Ingonyama izalwe ukuba ibonakale, idlale iindima zokuqala, ukukhanya kunye nokunika wonke umntu ukukhanya kwayo kunye nobubele. Unentliziyo enkulu, enothando, kodwa enobungozi kakhulu. Nangona i-propensity ye-self-admiration, uLoise uhlala ethembekile kwaye uhloniphekile. Isimemezelo kunye nesibindi siyamkhuthaza ukuba aphumelele ezintsha. Uxanduva lwakho kunye nabanye lunceda ekulwa neemvavanyo. Yintoni umnyaka we-2014 ukulungiselela abamele balo mqondiso ovuthayo?
Uya kufunda ukuthembela ubulumko bento yonke eyenzekayo kwaye abonakalise ubunjani bobufazi.
Impembelelo kaSaturn uya kuvakalelwa ekufuneni ukuzimela kunye neemeko zemali ezizinzile. Ngobudlelwane nezihlobo eziseduze, kuya kufuneka utyhoboze i-i, unike wonke umntu ilungelo lokufumana indawo. I-Jupiter iya kunceda kakhulu ubukhulu bokubumba kunye nokukhuthazeka ebomini bakho. Kuya kunika nokuphumelela entliziyweni yakho. Ukuhlala kwiCarcer kwisahlulo sokuqala sonyaka, uya kuba negalelo ekuphumleni okuphumelelayo kunye nokunyuka kwenzalo yengqondo kunye nobugcisa. NgoJulayi, ukuhamba ngesibonakaliso seNgonyama, iJupiter iya kukunika inhlanhla kunye novelwano kwabanye. Ndiyabulela impembelelo yakhe, unenzuzo ukutshintsha umfanekiso wakho nokuzithumela. Ukususela ngoMatshi ukuya kuNovemba, iNyanga yeMnyama izakuzama ukukunxusa kwizenzo ezingenangqiqo: ukutshutshisa, ukungaqiniseki okanye ukuzikhukhumeza ngokweqile zizo zonke izibilini zakhe. Khuthaza uzuko olufanelekileyo kunye nokuziphatha ukuze uncede. I-Mars eLibra ukususela ngoJanuwari ukuya ekupheleni kukaJulayi, isebenze uxhulumaniso lwakho, ikhumbula isidingo sokuphakamisa izinga lemfundo. Kuza kufuneka uhambe ezininzi, uhlangabezane nemingcipheko yokuziphatha. Kodwa ngoDisemba uya kuba nenzuzo yenzuzo.
Wazalelwa ngoJulayi 23 ukuya ku-Agasti 1.
Ngentwasahlobo uya kuziva ngathi uyindlovukazi ethandekayo, into ephambili kukukhumbula imigaqo yentle enhle kunye nomlinganiselo wenani. Ingqungquthela yokuthandwa kwakho kunye nenhlanhla iya kuba yithuba eliphakathi kwe-Julayi ukuya ekupheleni kukaAgasti. NgoJanuwari-Febhuwari, iNyanga yeMhlophe iya kutsala abantu abaqaqambileyo kwaye ikufundise i-hobby ewusizo. Kwisiqingatha sesibini sangoSeptemba, kukho ubukhulu bokutyelela kwelinye ilizwe kwinkampani enhle.
Wazalwa ngo-2 ukuya ku-12 Agasti.
NgoJanuwari kwaye ixesha ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi liya kukhunjulwa ngokuhamba, ukucetyiswa kwengqondo kunye nemisebenzi yoluntu. Isicwangciso somtshato nohambo olude ukusuka ngoFebhuwari ukuya kuDisemba. Ukususela ngoJuni, uya kugxininiswa ngesini esahlukileyo. Ukususela ngoJuni ukuya kuSept ulawulo oluqilileyo luya kufuna ikhaya. NgoSeptemba-Oktobha uza kuzisa abanye.
Wazalwa ngoAgasti 13 ukuya ku-23.
Ukususela ngoFebruwari ukuya ku-Ephreli noJulayi, uya kuba nokwandisa iminqweno yakho kwaye ukhuseleke kwimisebenzi ebalulekileyo. Ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi, ukuphefumlelwa kubangela iiprojekthi zakho zokudala. Ekwindla isondlo sakho sesondo siyakubonakalisa ngamandla okhethekileyo, isiphumo oya kubona ngoNovemba-Disemba. Ungayisebenzisi kakubi ukupela kwakho.
HE, nakanjani, ukubala ixesha elifanelekileyo, liya kufumana impumelelo kunye nokuqaphela jikelele.
Inomdla wakho kwiingcamango eziyinkimbinkimbi kunye nemigangatho ephezulu iya kubakho ubunzima bokuphila, ngoko ukukhungatheka akunakuphetshwa. Kwisiqingatha sokuqala sonyaka, uhambo oluqhelekileyo lwezorhwebo lunokwenzeka. Enkonzweni ngeli xesha kuya kuba neklasi elincinci lokuziqhelisa, kodwa ezininzi ixesha elingaphezulu kwexesha. Ukususela ngoJanuwari ukuya ku-Ephreli, phantsi kwefuthe leemeko, uya kuthatha isikhundla esinqabileyo. Ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi, ngokubaluleka kwinjongo ecacileyo nenjongo zobunkokeli, uyaphakamisa kwinqanaba lezentlalo. Into ephambili kukuba wenza ngokwenene into yakho. NgoJanuwari, ngoFebruwari noAgasti ukuya kuDisemba, themba ngakumbi intuition yakho.
Ukususela ngoMatshi ukuya kuMeyi, cingisisa ngezenzo, qhagamshelana nabahlobo bakho. Unokuthi ungachazwanga ngokuzithemba. Ehlobo, ukukhangela kwakho kuya kwanda emehlweni abo bafazi. NgoSeptemba, ukufunda kwamanye amazwe kuya kuhambelana nobudlova.
Unyaka wonke uyamkeleka kwiimeko ezibandakanya amazwe angaphandle, isayensi, kwakunye neenkundla kunye nobudlelwane bokwakha. Inyanga enamandla kakhulu kunyaka iya kuba ngo-Apreli. Ukususela ngoMeyi ukuya ekupheleni kukaJuni, ishishini, imithwalo yengqondo iza kuzisa iintlawulo. I-autumn yindawo yakho ephakamileyo.
Ukususela phakathi koJanuwari ukuya phakathi ko-Apreli, lungiselela ukuhamba, ukuthetha okusebenzayo. Inhlanhla iya kuba kwicala lakho. Kwisiqingatha sesibini sonyaka unokutshintshela kwi-wavetic romance, into ephambili - ungayikhohlwa ngezoshishino.
Umsebenzi onzima uyintloko kwimpumelelo yakho
Yiba nesibindi ukudibanisa unxibelelwano, ulwazi olutsha kunye nolwazi. Ubuhle kunye nobuhle kufuneka buvela kwimikhosi yakho, iingcamango nezenzo. Oku kuya kuqinisekisa impumelelo yakho kunye nokuthandwa.
Ngesiqingatha sokuqala sonyaka, ubuhlobo bakho bobuhlobo buya kuba yinto yonke into ephupha ngayo intombazana: i-romance, iintyatyambo, izipho ezintle, iinkundla zentlonipho, iintlanganiso ezingenakulibaleka kwiindawo ezizimeleyo okanye ezibucayi. Ekubeni kunokwenzeka ukuba ummangali ofihlakeleyo okanye wena ngokwakho uya kuba nesithakazelo ekungatsheleni nantoni na ngaye. Umanyano wakho uya kuba neentlobo ezininzi ngokusekelwe kwintlangano yokomoya, umhlobo wemiphefumlo. Kwisiqingatha sesibini sonyaka uza kufuna ukuvelisa iqabane lakho kwiimvumi zakho kwaye uphulaphule izimvo zabahlobo bakho. Ulwalamano phakathi kukaJuni noSeptemba luya kusekelwe ngokukodwa ekukhonkeleni ngokwesondo, kodwa ekuwa baya kufumana izinga eliphezulu lokuthembela kunye noxanduva. Ukunikezelwa kwesandla nentliziyo kunethuba lokuva ngoMatshi, ngoMeyi, ngoSeptemba okanye ngo-Oktobha. Unxibelelwano olunzulu kunye nomlingane luya kusuka ngoJanuwari ukuya kuMatshi kunye ngoNovemba-Disemba.
Ikhaya lakho liyinqaba yakho
Unyaka ulungele ukuxazulula imiba kunye ne-estate, umsebenzi wokulungisa. Ukususela ngoJanuwari ukuya kuMeyi kwaye ngo-Agasti, izimo zezindlu ziya kuphucula, ukufudukela ixesha elide kulindelekile okanye umntwana omdala uya kushiya isidleke somzali. Kwakhona kunokwenzeka ukuzalisa intsapho. Kubalulekile ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwezizukulwana. Kwisiqingatha sesibini, qi niseka ukuba uthatha inxaxheba kwiingxaki zabazali. Abantwana bayakuvuyela ubuchule babo kunye nokukwazi ukwenza ngokuzimela nangokucace. Iqabane liza kugxininiswa kwiinkalo zomsebenzi, uya kukwazi ukunyamekela indlu ngoFebruwari, ngoJuni, ngoAgasti.
Ukunxibelelana okusebenzayo, ukwandiswa kwesangqa sabahlobo kuyimfuneko ebalulekileyo ekukhuleni kwakho, oku kubonisa iNode ephumayo kwisibonakaliso seLibra. Ndiyabulela kwiminqweno efanayo, uya kuhlaziywa ngezihlobo ezikude. Ukususela ngoJanuwari ukuya ekupheleni kukaJulayi, isangqa sakho sangaphakathi siya kuguquka kakhulu. Ngo-Matshi-Epreli, ubeka umngcipheko wokuhlangabezana nokuhleka, ukuchaswa, ukusetyenziswa kakubi kwethemba lakho. Kwisiqingatha sokuqala sentshukumo enkonzweni kuya kudala umoya oyingcipheko, ayiyi kuvumela umzuzwana ukuphumla. NgoFebruwari, ngoJuni no-Oktobha, uya kuhlanganiswa yinkampani ethembekileyo yabantu abafana nomntu, kwaye abantu abangenangqungquthela baya kuvela kwimvelaphi.
Ukuhambelana nomzimba nomphefumlo
Kulo nyaka ubuchule bokubuyisela emzimbeni wakho buphezulu. Izifo ziza kuba zibangelwa zizizathu zengqondo. Ngako oko, ukulwa ngokukhathekayo: ukuthatha inxaxheba kwiziganeko zemikhosi, ukunxibelelana nabantu abanomdla. Gcina uxinzelelo lwegazi kwaye wenze imisebenzi ekhethekileyo yokuphuhliswa kwamajoyina. Ngesiqingatha sokuqala, qaphela isibindi, i-pancreas, inkqubo yokuzala kunye ne-gallbladder. Kwakhona, unethambeko lokutya ngokutya, elineengxaki nge-fatabetism. Ukuchonga izifo kuya kuba lula kwisahlulo sokuqala sonyaka. NgoJanuwari-Febhuwari, uya kubonakaliswa kwiinkqubo ezivuthayo. Ukususela ngoJulayi ukuya kuSeptemba, ukulandelwa kwamandla kulindeleke.
Iinjongo ziyafezekiswa, hamba
Ngenxa yokungqubuzana phakathi kweMarsi, iJupiter kunye nePluto, ubuhle obuphezulu bokulahlekelwa kwemali kunye neendleko ezinxulumene neemeko zongxamiseko ziya kuhlala ziphakathi kwaJulayi. Ngeli xesha, ungaboleki imali, ungabandakanyeki kwiintlanga kwaye ungathathi mboleko. Ngethuba lonyaka uya kuba neengeniso ezingezezinye ezingenangqungquthela, inzuzo evela kwimisebenzi yokudala, kodwa nakwiyure yokuqala yonyaka abayi kukwazi ukukhupha iindleko ezingalindelekanga. Ngomhla kaNovemba, i-receipt eyodwa engenakulungiselelwa isamba esibalulekileyo kulindeleke. Ukususela ekupheleni kukaFebruwari kuya kubakho ukufumana indawo engaphezulu yokuthembisa yomsebenzi. Ukwanda kwenkonzo kulo nyaka akukho mithintelo, kodwa ngoFebruwari, ngoJuni, ngo-Oktobha imizamo yakho iya kuba yincinci. Ukususela phakathi koJulayi ukuya kuDisemba, uya kufinyelela kwizinga elitsha kwimisebenzi yakho yobugcisa. Umsebenzi wakho kukuzibeka kwiinjongo ezinomdla kwaye ezingenakufunyanwa ekuqaleni kokubona kwaye uhambele ngokufanelekileyo, isinyathelo ngesinyathelo, kubo.
IHoroscope yeentlanzi-Abafazi ngoDisemba 2016
Izimpawu zezodiac, ezilindele utshintsho olukhulu ngo-2018
Isaladi enomquba kunye ne-squid enekotyi
Amaqanda afakwe emnandi